Message from the Vice-Chancellor and SRC isiZulu - UKZN Virtual Graduation
USolwazi uNana Poku
UMYALEZO OHLANGANYELWE WOMPHATHINYUVESI NOMENGAMELI WE-SRC WEQOQO ELETHWESWA IZIQU NGOWEZI-2020
Siyahalalisa kakhulu eQoqweni Eletheswa Iziqu ngowe-2020
uMnu uSifiso Simelane
Siyadabuka ukuthi asikwazi ukuba nani nemindeni yenu siqu ngenxa yobhubhane i-COVID-19. Noma kunjalo isidingo sokugubha simile. INyuvesi iqonda ngokuphelele ukuthi niyazidinga izitifiketi zenu ukuze niqhubeke nezinhlelo zenu futhi lokhu ngeke kuhlehliswe. Maduze sizonazisa ukuthi izitifiketi zenu (okuzoqale kube ngezithunyelwe ngobuchwepheshe bezokuxhumana) nencwajana yomcimbi wokwetheswa iziqu. Sizimisele ukuthi sibe nomcimbi lapho siyoba ndawonye khona siqu uma sekuphephile ukwenza kanjalo. Kuyoba yintokozo kithina ukwemukela bonke abethweswa iziqu bangonyaka wezi-2020 nemindeni yabo eNyuvesi ukuze sigubhe impumelelo yethu ehlukene.
Isikhathi sokwethweswa iziqu yisikhathi esithintana kakhulu emoyeni okuyisikhathi esimqoka kinina, emindeni yenu, abangani nabo bonke ababenenhlanhla yokunakha nokuneseka. Okukhulu kakhulu wukuthi iziqu zenu zisho ukuthi nikwazile ukubamba ulwazi lwemikhakha yenu enilufundile – okufakazela isimilo senu, izifiso nokuphokophela kwenu.
Kukhona okukhulu kunokuthola iziqu. Lokhu kungukugcwaliseka kwesikhathi empilweni lapho nikhule khona nangezinye izindlela eziningi ezihlukene. Nisabalele ngokomqondo nakwazi ukwazisa umphakathi nesintu noma abalingani benu. Senikwazi ukubambisana nabanye abantu ngenxa yeqholo eseninalo namakhono eseninawo. Nithole abangani enizobazi impilo yenu yonke, nembala lokhu yisipho esikhulu.
Sethemba ukuthi zonke lezi zinto zizobonakala kinina nangaphansi kwalezi zimo ezingakaze zibonakale nezinzima. Ukuphokophela kwenu, ukukwazi ukucabanga kwenu nesineke nesimilo senu kuvele kuyavivinywa kumanje ngaphezu kwalokho ebesingakulindela ezinyangeni ezimbalwa ezedlule.
Emhlabeni wonke izinkumbi zabantu nemiphakathi bazama ukuqonda ukuthi kusho ukuthini ukuxhumana. Uma sibhekana nokwesaba kwethu, singakwazi ukuthi sikushintshe kube wuzwelo, sikwazi ukuphuma kule nkanankana, sizinikele ekubeni nobuntu nomusa nezindlela ezintsha zokuba ngabantu nezokwenza izinto.
Siyaphinda futhi sithi siyabonga ukuhambisana nathi ngenkathi sizama ukubhekana nalesi simo esingakaze sibonwe nesinzima. SiyiNyuvesi, sizoqinisa imizamo yethu yokuqinisekisa ukuthi sigxila ezintweni ezimqoka ezibhekene nesintu ukufeza lokho umphakathi okulindele kithina ngaphezu kwemfundo nocwaningo.
Siyaphinda futhi sithi halala eQoqweni langowezi-2020, imindeni nabangani abanesekile. Sinifisela impumelelo yodwa.